I-TiedCo Imemezela Ukwethulwa Kwe-Tiedcoin - I-Worlds First Japan Stablecoin - Ubambiswano Olungafani neBeaXchange Ukuhweba Ipulatifomu | Database lakamuva Lokuposa
I-TiedCo Imemezela Ukwethulwa Kwe-Tiedcoin - I-Worlds First Japan Stablecoin - Ubambiswano Olukhethekile nePulatifomu Yokuhweba yeBeaXchange
Ikhaya » I-imeyili Database Blogs » imeyili Marketing » I-TiedCo Imemezela Ukwethulwa Kwe-Tiedcoin - I-Worlds First Japan Stablecoin - Ubambiswano Olukhethekile nePulatifomu Yokuhweba yeBeaXchange
I-TiedCo imemezele ukukhishwa kwe-solidcoin entsha, ehlanganiswe ngokuphelele yi-euro (EUR) ne-yen (JPY,) futhi ekwazi ukuthengiswa epulatifomu yokuhweba ye-cryptocurrency efakwe ngokugcwele beaXchang.com.
Ukukhishwa kwaso kuphawula ukungena kweJapan emakethe i-solidcoin kanye namazwe okokuqala i-Yen i-cryptocurrency.
I-TiedCo ihlanganyele ne-beaXchang.com ukuvumela ukuhweba kwalezi zimo zokuzinza kuleso sisekelo. Imibandela yokudedelwa kwamaTiedCoins amabili ku-eaXchange.com ihlinzeka iTiedCo ukuthi ibe ngumenzi wemakethe walezi zinhlamvu zemali futhi ime emakethe ukuthenga-ukubuyisa yonke imali ekhishwe ngenani lobuso eliseduze.
Le ndlela yokwenza izimakethe ezintsha kanye nesikhungo sokuthenga emuva ivumela ukwanda okukhulu ngalezi zinhlamvu zemali kanye nekhono labanikazi lokuguqula izinhlamvu zemali zibe yimali ye-fiat ngendlela elula necacile.
Uhlamvu 'oluzinzile': Ingxenye edingekayo yemakethe
Ngenkathi ekuqaleni umbono wokuba ne-cryptocurrency exhaswe yi- “solid” currensets ye-fiat kungazwakala kuyinto ehlekisayo, ukuba nokuqonda okuthile ngemakethe ye-cryptocurrency nezinkinga zayo zamanje kungasiza ukuqonda ukuthi kungani zithathwa njengezinesidingo kulezi zinsuku.
Imibiko eminingi igcizelela ukuthi ukuthengiselana kwe-cryptocur lwemali kuthatha isikhathi eside, kepha akunjalo. Ukuhanjiswa okuningi kwe-crypto kwenzeka empeleni ngemizuzwana, yize kukhona impela ukulinganiselwa kokukhokhelwa ngomzuzwana kuya nge-blockchain esetshenzisiwe.
Lapho kusetshenziswa imali ye-fiat ukufudumeza okwenziwayo kwe-crypto inqubo inqubo ingahamba kancane. Njengoba imakethe ye-cryptocur lwemali ingeyona into ezinzile, lokhu kubeka abatshalizimali abaningi noma abangaba ngabatshalizimali engcupheni yokuthenga okuthile namuhla okuzoba nokubaluleka okungaphansi kwalokho. Ngandlela thile, ukuthengisa okuthile namuhla ukuthola ingxenyana kuphela yenani lamanje ezinsukwini ezimbili ukusuka manje kungaphansi kokuqinisa.
Ama-Stablecoins ahlinzeka uthango ngokumelene nezithiyo ze-cryptocurrencies yendabuko. Ama-Stablecoins empeleni athuthukisa umjikelezo wokuthengiselana ngokusheshisa ukuguqulwa kwezimali ezingazinzile kube ezinzile noma ngenye indlela. Ukuguqula futhi kusuka ku-solidcoins kuya ku-fiat kunikeza ukukhathazeka okumbalwa njengoba umhwebi eqinisekiswa ukuthi kuzoba nokuncipha okuncane noma akukho ukwehla kwenani elilindelwe le-cryptocurrency.
Isebenza kanjani i-Stablecoins Ngenkathi i-solidcoins ibe khona isikhashana manje, kungalezi zinsuku kuphela lapho umthelela wazo emakethe ubonakalayo. Ngokuqondile, kusukela ekuqhubeni imali, kwakukhona ukungabethembi okuningi kanye nezingxoxo zokuthi zizosebenza kanjani - noma kungani zizosebenza nhlobo - ezivame ukwanga izihloko
Eqinisweni, bekusekupheleni kwe-2018 kuphela lapho kwacaca ukuthi imakethe ingabamba ama-solidcoins. Isizathu sokuqala esiyisisekelo abantu sokugcina kude ne-cryptocurrensets kwaba ukuzithoba kwabo, futhi ama-solidcoins ahlinzeka aphunyuka kulokho.
Kunamamodeli amabili asebenzayo we-solidcoins.
Imodeli yokuqala yama-solidcoins yi-algorithmic. Okusho ukuthi, ama-solidcoins akhiqizwa womabili futhi athengiswa ngokusekelwe kwe-algorithm eyayizama ukugcina imali ngohlamvu olunikeziwe - ngendlela efanayo lapho amabhange aphakathi nendawo avame ukukwenza ukugcina amanani wemali ye-fiat ngamanani athile.
Inkinga ngalolu hlobo lwemali kwabaningi ukuthi abanasipele noma yini. Lokhu kubalulekile ngoba kusho ukuthi i-solidcoin, noma ngabe ihloselwe ukuqina, ingakhubeka kahle futhi ingabi nalusizo ngobusuku obubodwa, kungaba ngokushintsha kwemakethe noma ngephutha le-algorithm. Kungakho kukhona uhlobo lwesibili lwe-cryptocurrency - olulodwa olunama-backups wangempela. Lawa ma-backups agcinwa yizinkampani azikhipha futhi angaba kwezinye izindlela zemali noma kwizakhiwo ezinamanani aqinisekisiwe. Njengoba kunikezwe ukusekelwa okungokwemvelo kohlamvu lwempahla ebonakalayo, i-solidcoin ayikwazi ukuwa, ngoba kukhona imali yangempela ngemuva kwayo, futhi kukhishwa ama-solidcoins futhi asebenza ngokusekwe ekulayelweni kokufunwayo nokunikezwayo.
Leso sigaba sesibili yilapho kuhlala khona uTiki.
Kuboshwe: I-Fiat Stablecoin Tiedcoin iza ngezinketho ezimbili okwamanje - I-Tied2EUR neTied2JPY.
Ngabe ama-Stablecoins azosebenza ngempela?
Enye yezinto ezibambekayo emakethe ye-crypto yabaningi, njengoba sekushiwo, ukungqubuzana kwayo. Lokhu kuguquguquka akulindelekile ukuba kuyeke noma kunini maduze. Ama-solidcoins ase-Fiat asekelwe emuva anika abatshalizimali imvelo engenazingozi lapho bangangena bangene emakethe bethanda.
Ngokusobala, imakethe ye-solidcoins iyakhula futhi ochwepheshe babikezela ukuthi bazosiza ukuqhuba ukwamukelwa kwe-crypto. Ngenkathi kungewona wonke ama-solidcoins angahle ahambele leyo ndlela, okwamanje kungabonakala ukuthi azoba yingxenye enkulu yemakethe. Phakathi kwawo wonke ama-solidcoins, ama-fiat-backed ndio aphumelela kakhulu. Uma sengeza okungeziwe okulethwa yi-Tiedcoins, akukho ndlela engcono yokuyihlola njengamanje
← Uhlu lwe-imeyili Yezilwane
Ngingenisa kanjani ababhalisile →